Izindawo ezihamba phambili zedolobha elikhulu lomhlaba jikelele zezivakashi zase-US
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindawo ezihamba phambili zedolobha elikhulu lomhlaba jikelele zezivakashi zase-US
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba zeBahrain Breaking • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • France Izindaba Ezintsha • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba Ezintsha Zase-Indonesia • Izindaba Ze-Kuwait • Izindaba zeMalta Breaking • Izindaba Ze-Oman • I-Saudi Arabia Breaking News • ezithrendayo Manje • Izindaba ZaseTurkey • Izindaba ze-UAE Breaking
Izindawo ezihamba phambili zedolobhakazi lomhlaba jikelele zezivakashi zase-US.
Ukuze kunqunywe ukuthi yiziphi izihloko ezingcono kakhulu ongavakashela eholidini, ochwepheshe bezokuvakasha bahlaziye izihloko ezithuthukisiwe ezingama-69 ezicini ezihlukahlukene ezihlanganisa izindleko zamahhotela nezokuthutha, isilinganiso sezulu sezulu, kanye nenani lezindawo ezihehayo nezindawo zokudlela.
I-Ankara, Turkey inhloko-dolobha ehamba phambili ngamanani amahhotela, ngenani elijwayelekile elingu-$45.74 ubusuku ngabunye.
ILuxembourg inezokuthutha zomphakathi zamahhala futhi iyinhloko-dolobha ehamba phambili kwezokuthutha emhlabeni.
I-Valletta, i-Malta iyinhloko-dolobha ehamba phambili yokuhehayo (311 nge-KM ngesikwele) kanye nezindawo zokudlela (442.6 KM per sq).
Njengoba ubusika busondela, amadolobha ayizindawo ezikahle zokuya eholidini, agcwele inkatho yokwenza noma yisiphi isimo sezulu.
Futhi kubahambi abanethemba lokuphunyuka USA manje, njengoba imingcele yokuhamba isusiwe, amadolobha amakhulu emhlabeni wonke ahlinzeka ngendawo ekahle yokuvakasha yedolobha.
Kodwa yiziphi izinhloko-dolobha ezingcono kakhulu kubavakashi?
Ukuze kutholwe ukuthi yiziphi izihloko ezingcono kakhulu ongavakashela eholidini, ochwepheshe bezokuvakasha bahlaziye izihloko ezithuthukisiwe ezingama-69 ngebanga lezinto ezihlanganisa izindleko zamahhotela nezokuthutha, isilinganiso sezulu sezulu, kanye nenani lezindawo ezihehayo nezindawo zokudlela.
Amadolobha aphezulu ayi-10 ahamba phambili ezivakashi emhlabeni jikelele
Isibalo Inhlokodolobha Izwe Izindleko Ezimaphakathi Zehhotela ($) Isilinganiso senani Lethikithi Lendlela Eyodwa Yethikithi Lezokuthutha Zomphakathi Zasendaweni ($) I-Average Temp (amadigri c) Isilinganiso Semvula Yonyaka (mm) Inombolo Yezikhangayo Inombolo Yezindawo zokudlela Amanani Aphelele
1 I-Valletta Malta $ 199.58 $ 2.37 18.80 427 190 270 6.74
2 Abu Dhabi I-United Arab Emirates $ 158.69 $ 0.55 27.92 42 591 2,778 6.24
5 Riyadh I-Saudi Arabia $ 169.78 $ 0.87 26.00 66 218 1,289 5.74
8 I-Kuwait City Kuwait $ 180.87 $ 0.85 25.70 128 423 1,144 5.56
9 Ankara igalikuni $ 45.74 $ 0.42 12.00 451 532 3,888 5.53
I-Valetta, eMalta ivezwa njengenhloko-dolobha ehamba phambili emhlabeni enamaphuzu angu-6.74 kwangu-10, anenani eliphakeme kakhulu lezindawo ezikhangayo nezindawo zokudlela kuwo wonke amadolobha amakhulu.
I-Abu Dhabi, inhloko-dolobha ye-UAE, ikleliswe endaweni yesibili ngamaphuzu angu-6.24 kwangu-10. Amazinga okushisa amaphakathi edolobheni afinyelela kuma-degree angu-27.92 futhi isilinganiso semvula simane singu-42mm ngonyaka, okwenza lokhu kube indawo enhle uma ungumuntu ofuna ilanga.
I-New Delhi, e-India ikleliswe endaweni yesithathu ngesilinganiso samaphuzu angu-6.06 kwangu-10, amazinga okushisa afinyelela ku-25 degrees kanye nezindawo zokudlela eziyi-12,409 ongakhetha kuzo.
I-Bangkok, Thailand inhloko-dolobha ehamba phambili ngezinga lokushisa elinesilinganiso sama-degree angu-26.6.
I-Cairo, i-Egypt inemvula encane kakhulu enemvula engu-18mm kuphela ngonyaka.